Ukutsala iingcamango ezintle kunokuba zibi
Unokwenza utshintsho oluhle
Kukho ubuqhetseba kuMthetho woKhenketho kwaye akunjalo njengomlingo onokucinga: sitsalisa izinto esizigxile kuzo. Xa sigxininisa ukungabi nanele, le fomu ifowuni isekela "ukungabikho" kwinto esihlala sinayo. Sisoloko sikhunjuzwa ukuba sisebenzise ukuqinisekiswa kwaye sigcine iingcamango zethu zilungile, kodwa "ukuzibuhlungu" kuyaqhubeka kuba yinkqubo yabantu abaninzi. Ukongezelela, sinokubhobhozwa ngamagama angaphindiyo ngokucinga kwethu, njenge:
Kutheni ndingakwazi ukufikelela phambili?
Andikwazi ukuyihlawula ibhola.
Andiyi kuba ngumpumelelo.
Abantu abaninzi banetyala lokuphinda ngokuphindaphindiweyo ukunganakali okanye kwiingcamango okanye ngamagama. Ingqondo engalunganga ingabonakalisa imeko yobomi yangoku kunye nokutsala iimpawu ezinobungozi kungabikho ubungqina bokuthi umthetho wokukhangela usebenza. Ukutsala iziphumo kunye nokuphuma kwindlela yokucinga engalunganga kunokwenzeka ngeemboniso, ukuqinisekiswa kunye nokubonakaliswa .
Ukuqhawula umkhuba wokukhawulela izinto ezintle
Sigxininisa kwizifo, imisebenzi ehlawula phantsi, kwaye ngaphantsi kokuzalisa ubudlelwane ngaphandle komkhwa. Ukuqhekeza inkqubo, njengawo nawuphi na umkhwa omubi, uya kuthatha inzame, ngakumbi ukuba kuyinto engokwemvelo ukuhlala kwizinto ezimbi ngenxa yeminyaka. Ngokuqhelekileyo abazali bafundisa olu hlobo lokuziphatha ngokuba ngumzekelo wokugxeka okanye ulwimi olungalunganga. Xa kunjalo, banokuzibonakalisa ukuziphatha ngendlela abayifunayo kubazali babo, njalo njalo, kubuya kwizizukulwana.
Indlela elula yokwenza izinto ezibonakalayo kunye nokufumana izimo ezintle kwisisombululo kukuhlawula izandla kunye nokudala imifanekiso emihle yamehlo kunye nengqondo yakho ukugxila kuyo.
Ukukhawulwa kweZithuba eziBonakalisiweyo
Enye indlela yokutsala iingcamango ezintle, amava kunye neemeko ebomini bakho kukudala i-scrapbook yokubonakalisa.
Gcwalisa amaphepha ngeenkcazo kunye nokutshintshana kwemifanekiso ebonisa izinto ofuna ukuzenza kwizinto zobomi. Sebenzisa malunga neveki ukudala amaphepha ahlukeneyo kwincwadi kwaye ubuyekeze le ncwadi kwimihla ngemihla, ngeveki okanye ngenyanga ngokuxhomekeke kwiinjongo zakho. Abantu akudingeki bazi malunga nencwadi yakho yokubonakalisa ukwenzela ukuba iziganeko ezintle kwaye ezimangalisayo zifike ebomini bakho.
Amanyathelo okudala i-Scrapbook ye-Personal Manifesting
Imiyalelo yokudala incwadi ebonakaliswa yenziwe ngumntu oyintloko. Khetha amagama aqinisekisiweyo kunye nemifanekiso enemibala echithwe kumaphephancwadi. Amagama nemifanekiso ekhethiweyo iya kuxela amabali malunga nento oyithandayo kakhulu ngobomi bakho. Kwakhona, zibandakanya izinto ofuna ukutsala ebomini bakho. Yakha amaphepha amaninzi afunwayo okanye ayifunayo kwi-scrapbook yakho yokubonakalisa.
Qinisekisa ukuba ufake iifoto zabahlobo, izilwanyana kunye namalungu entsapho. Iimfuno ezifunekayo zingaba lula: izikiti, iphepha, iglue, ukunyatheliswa kwamaphephancwadi, kunye nezithombe ezizithandayo. Le projekti yindlela ejabulisayo yokugxila kwizinto ezizisa uvuyo, ubuhle kunye nokuchuma.
UMthetho woKhenketho Iindaba eziphumelelayo
Ukuze ufunde ngemiphumo emihle engangena ebomini bakho ngomthetho wokukhanga, funda eli bali malunga nomama ongatshatanga owakhupha umnqweno wakhe kwindalo yonke:
"Ndibe ngumama ongatshatanga iminyaka engama-7, kwaye ngelo xesha ndibenobunye ubudlelwane obunobungozi. kodwa endaweni yokushiya, ndatsho kanye into endifuna ukuba indoda yam ibe nayo. "Ndathi kum dadewethu," Ndifuna nje ukudibana nomntu ongu ... "kwaye ndabhala ngubani na wam umlingane opheleleyo kunye nobudlelwane. Emva koko, mayeke, ngokukholwa ngokupheleleyo ukuba ngelinye ilanga ndiza kumhlangabeza. Kwiiveki ezimbini kamva, ndenze.Siye saceba ukuhamba kunye kunye nosana emva kokubonakalisa kwam ngokuzayo. Ndiyabulela imihla yonke ukuba ndifumene Umthetho Wokhenketho, njengoko utshintshe ihlabathi lam. "
Yiyiphi iRobins Sifundisa
Indlela yokuLawula kunye nokuchonga iArborvitae
Mayelana Nezindlu Zase-Antebellum Phambi Kwangemva Kwemfazwe
Oko Kufuneka Ukuba Yi-Pro Surfer
Ihlabathi Elilahlekileyo LamaGandhara eBuddhist
Ubudlelwane be-Gray's Anatomy
I-Latin Alphabet Utshintsho: Indlela iArafbethi yamaRoma eyafumana ngayo iG